China oo Soomaaliya soo gaarsiiyay $4 million oo gargaar binu Aadanimo. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta China oo Soomaaliya soo gaarsiiyay $4 million oo gargaar binu Aadanimo.
Dowlada Shiinaha ayaa sheegtay in ay gargaarka bani’aadamnimada ugu deeqday Soomaaliya iyadoo uu jiro xiriir wanaagsan oo laba geesood ah oo ka dhexeeya laba wadan.
Danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya Fei Shengchao, ayaa sheegay in sahayda bani’aadamnimo ee ka timid Shiinaha ay ka kooban tahay 10,000 teendho, 50,000 marokaneecooyin, 20,000 xirmooyin gargaar ah iyo miisaanka miisaanka ilmaha iyo agabyo kale oo caafimaad.
Safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa sheegtay in gargaarkaan uu ku kacayo 4 Milyan oo doollarka Maraykanka.
“Musiibada ( COVID-19) ayaa saamayn ku yeelatay taageerada bani’aadamnimo ee adduunka oo dhan. Sahaydan, qiimaha wax -soo -saarka ayaa kor u qaadaysaa 15 boqolkiiba qiimaha dhoofinta ayaa kor u kacay toddoba jeer,” Fei ayaa lagu yiri war -saxaafadeed laga soo saaray Muqdisho.
Dowladda Shiinaha ayaa gargaarkan soo gaarsiiday Soomaaliya inkastoo qiimaha wax soo saarka uu sare u kacay. Fei wuxuu yiri taasi waa habka Shiinaha ee caawinta dadka kale.
Danjiraha ayaa intaas ku daray in Shiinaha iyo Soomaaliya ay caan ku yihiin isu-damqashada midba midka kale iyo adkaysiga xilliyada adag.
Wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa uga mahadcelisay dowladda Shiinaha gurmadka bani’aadannimo, iyadoo sheegtay in ay ku soo aaday xilli aad u xasaasi ah.
Gargaarka bani’aadamnimo ee ka yimid Shiinaha ayaa lasoo gaarsiiyay xilli Soomaaliya ay la daalaa dhacaysay abaaro, daadad iyo ayax duulaan ku ahaa, wasaaradda gargaarkana ay dalbatay in lala soo gaaro gurmad deg deg ah.
Previous articleMaxaa sababay in Shirkadda Apple qaybta Shiinaha saarto App-ka Qur’aanka laga barto?
Next articleRaysal wasaaraha Soomaaliya oo Puntland iyo Galmudug ku boorriyay in ay xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan Alshabaab